Hiran State - News: M/weynaha mustaqbalka Somaliya Prof warfaa oo beesha caalamka kula taliyey iney ilaaliyaan.
M/weynaha mustaqbalka Somaliya Prof warfaa oo beesha caalamka kula taliyey iney ilaaliyaan.
USA:(hiranstate.com)-M/weynaha mustaqbalka Somaliya Prof Ahmed M Warfaa oo bilaabay wajigii labaad ee ololahiisa kuna sii jeeda Shirweyne ay soo qaban qaabiyeen jaaliyada Somaliyeed ee Denver,Colorado halka uu uga sii gudbi doono wadamo ay ka mid yahiin Bariga dhexe.
Prof warfaa ayaa lagu wadaa inuu gaaro maalinta jimcaha magaalada Denver oo uu halkaasi kula kulmi doono jaaliyada Somaliyeed ee ku nool halkaasi. sidoo kale Prof-ka ayaa shirkaasi kedib kaka sii gudbi doona safar dheer oo uu ku soo ku tagi doono bariga dhexe.Ahmed Muumun Warfaa waxuu ka mid yahay mushaxaraxiinta u tartameysa hogaanka dalka ugu sareeya doorashada soo socota oo ay ka harsan tahay wax ka yar 5 bilood. musharaxa ayaa ka mid ahaa mushraxiintii ugu horeysay ee ololahisa bilaaba mudo hore kedib markii uu magaalada Mogdisho kula soo kulmay qeybaha kala duwan ee bulshada Somaliyeed oo ay ku jireen mudanayaasha baarlamaanka Somaliya.
Sidoo kale warar kale oo inaga soo gaaraya dalkaasi Kenya ayaa sheegaya in Prof Warfaa mar uu maagalada Nairobi kula kulmay diplomaasiin reer galbeed ah talo ku siisay in la ixtiraamo jiritaanka iyo madaxbanaanida dalka Somaliya, lana isticmaalo ereyo talo soo jeedin ah halkii la isticmaali lahaa ereyo diidmo qayaxan ah. wararku waxey intaasi ku darayaan in taladaasi ay aad ula dhaceen beesha caalamka.
Sida muuqata aduunyada waxii ka horeeyey 1988 waxey aheyd mid siyaasadeeda fadhiso oo qofka marka uu diplomaasi noqdo shaqo wax ku ool ah qaban jiray ,halka maanta inta badan shaqaalaha qaramada midoobay ay meel iska dhigeen diplomaasiyadii oo hada ay arintu ku soo aruurtay sidii uu qofkasta u ilaashan lahaa mushaarkiisa oo kaliya taasi oo sababta mararka qaarkood in dal dhan hogaankiisa waxii la doono leys kaka sameeyo.
Prof Warfaa ayaa ah musharaxa ugu cad cad musharaxiinta Somaliya ee xilkaan u taagan isagoo ololahiisa xoogoogooda ka wada dal iyo dibad.
Dadka saadaaliya arimaha siyaasada Somaliya ayaa qirayo in hadii Prof Warfaa ku guuleysto doorashada soo socota ugu yaraan waxa ugu horeya ee laga filan karo ay noqon doonto cadaalad iyo sinaan wada gaarta dalka iyo dadka Somaliyeed.
· admin on April 18 2011 14:08:11 · 0 Comments · 1846 Reads ·
14,638,434 unique visits